Mofomamy sy legioma holandey | Fitsangatsanganana tanteraka
Daniel | 15/04/2021 12:20 | Nohavaozina amin'ny 15/04/2021 13:21 | Pays-Bas
La gastronomy any Netherlands tsy manana ny laza sy ny fomban-drazan'ny firenena eropeana hafa toa an'i Frantsa, Espana na Italia. Fa kosa, ny Mofomamy holandey eken'ny besinimaro eran'izao tontolo izao. Ny Holandey dia mamaritra ny tenany ho nify mamy tsy mety simba izay mankafy mahandro sy mankafy karazana tsindrin-tsakafo sy vatomamy isan-karazany.
Alohan'ny hitohizany dia izao misy fampitandremana: feno sakafo matsiro sy alaim-panahy ny lahatsoratra anio. Tsy tsara ny manohy mamaky ho an'ireo misakafo:
1 Vatomamy holandey klasika
1.1 Zoute milatsaka
2 Paska krismasy holandey
Vatomamy holandey klasika
Izy io dia zava-pisotro misy alikaola be mpampiasa any Holland, fa koa any Belzika, Luxembourg ary faritra sasany any Alemana. ny zoute milatsaka ("Tete masira") amidy amin'ny cubes kely sy mainty. Ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny siligaoma ary ny tsirony dia mitovy amin'ny an'ny licorice. Misy karazany efatra samihafa arakaraka ny habetsaky ny sira ao anatiny.
Ny alikaola alika malaza, zoute drop
Ny Holandey dia manondro ny fananana fanafody sasany ho an'ny zoute drop, na dia mihinana azy io aza izy ireo satria tiany. Amin'ny mpivaro-mofo sasany dia amidy miaraka amin'ny fotony voanio, mint, tantely, ravina bay ary tsiro hafa izy ireo.
Izany dia endrika malefaka sy karamelan'ny waffle belza mahazatra (amin'ny Holandey, stroop midika hoe syrup sy wafel waffle io). Ity tsindrin-tsakafo ity dia voaomana amin'ny lapoaly manokana mizara efamira. Ny koba dia esorina miampita handraraka ny karamela ao anatiny mandritra ny fanomanana azy.
Stroopwafel: dikan-tenin'ireo waffle miendrika waffle malaza
Amin'ny toerana maro dia vonona izy ireo amin'ny alàlan'ny fanampiana hazelnuts voatavo miaraka amin'ny stroop, raha any amin'ny hafa kosa ny koba dia afangaro amin'ny kanelina. Mahagaga hatrany ny valiny.
Ny malaza vlaai Mofomamy mamy vita amin'ny koba masirasira feno voankazo (paoma, apricot, mananasy, plum na voaroy). Ao amin'ny resipeo mofomamy holandey sasany dia misy akora hafa toy ny kardarda na rhubarb.
Misy karazana tena mampiavaka ny vlaai nentim-paharazana. Ilay vary iray ohatra, dia feno vary sy crème, na dia misy aza ireo hafa manana crème whipped na sôkôla.
Mandehandeha eny amin'ny arabe rehetra any amin'ny tanàna na tanàna any Holandy, dia mahazatra ny orona hoentina amin'ny fofona poffertjes tsy azo tohaina. Manerana ny firenena dia misy fivarotana amoron-dalana kely izay anomanana ireo ankizy kely ireo amin'izao fotoana izao pancakes mafana miaraka amin'ny dibera miempo sy siramamy vovoka.
Poffertjes: pancakes mini holandey
Any amin'ny kafe Dutch ihany koa, ny poffertjes dia amidy ho sakafon-tsakafo mamy miaraka amin'ny kafe na dite. Misy aza ny fivarotana manokana amin'ity vokatra ity, antsoina hoe poffertjeskraam.
Paska krismasy holandey
Ny pastry Holandey dia miovaova manokana amin'ny fotoanan'ny Krismasy. Fotoana manokana mitaky tsiro manokana. ny Navidad any amin'ny faritra Andrefana manomboka hankalazaina amin'ny 6 Desambra, andron'ny Saint Nicholas (Sinterklaas).
Tamin'ny andro nahatongavan'i Saint Nicholas niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavan'izy ireo, dia nanamamo ny fiandrasana ireo ankizy holandey tamin'ny fisotroana sôkôla mafana sy fihinanana cookies. Ny olon-dehibe dia manao toy izany koa, na dia misy vera misy alikaola aza eny an-tànany.
Pepernoten ho an'ny Andro Saint Nicholas
Piet, mpanampy an'i Saint Nicholas, dia miandraikitra ny fizarana zava-mamy amin'ireo ankizy kely: pepernoten (cookies kely miendrika tsy ara-dalàna vita amin'ny rye, tantely ary anis) ary kruidnoten sakamalao. Izy io koa dia mizara ampahany amin'ny banky, mofomamy puff feno pesika amandy.
Toy ny any amin'ny faritra maro hafa eto amin'izao tontolo izao, ny Andro Krismasy any Holandy dia ankalazaina amin'ny maha fianakaviana manodidina ny latabatra feno entana. Ny fety dia miafara amin'ny kerststol, mofo voaloboka voankazo iray izay matetika koa feno paty amandy. Ity mofomamy ity, fomba fahandro mahazatra amin'ny mofomamy holandey, dia mitovy amin'ilay namboarina tany Alemana sy tany amin'ireo firenena eropeana afovoany.
Ny fiatraikany amin'ny sakafo hariva amin'ny Noely any Netherlands: ny kerststol
Amin'ny ankohonana mpivavaka dia aleon'izy ireo misolo kerststol amin'ny tsindrin-tsakafo manokana hafa: nifandray tamin'i muisjes, mofomamy spaonjy holandey rakotra amisary siramamy. Io no hanina ankalazana ny nahaterahan'i Jesosy ary koa amin'ny fanitarana dia anomezana hankalazana ny fahaterahana mandritra ny taona.
Amin'ny alin'ny Taom-baovao, ny fofon-diloilo avy amin'ny frigers lalina avy any an-dakozia dia fahita any amin'ny trano holandey. Ao amin'izy ireo ny matsiro oliebollen, fritters koba izay aroso irery siramamy misy vovoka na feno sombim-paoma sy voaloboka.
Ny mamy tsara indrindra hanombohana ny taona: ny Oliebollen
Misy karazana oliebollen isam-paritra (dikanteny: "buns solika"). Any amin'ny faritra Limburg, ohatra, dia miendrika donat izy ireo ary vonona koa hankalaza karnavaly. Etsy ankilany, any amin'ny faritany avaratra, ireo fritters ireo dia voaomana am-pitandremana manokana ary boribory indrindra, saika boribory.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mofomamy sy legioma holandey
ERIK WLDEMAR CUSTODIAN dia hoy izy:
MILA NY TELEPHONE NUMBER NY COTEPQUE DUTCH
Valiny amin'i ERIK WLDEMAR CUSTODIAN